Soo dejisan Wise Disk Cleaner 9.31 Standard... – Vessoft
Soo dejisan Wise Disk Cleaner
Falsan digsi Coobbi – software ah si dhakhso ah oo fudud si aad u nadiifiso computer ka files aan loo baahnayn. software The baaritaanku nidaamka u files aan loo baahnayn, waxay muujinaysaa warbixinta faahfaahsan oo ku saabsan iyo waxay bixisaa fursadaha eedda ka. Coobbi digsi falsan awoodo si aad u nadiifiso faylasha ku meel gaar ah, kayd, cookies, taariikhda web daalacashada ama codsiyada kale. software The u saamaxaaya in ay defragment drive adag. Falsan digsi Coobbi ku jira qalabka ay u Customize nidaamka nadiifinta ee baahidaada shakhsiyeed.
Correction of files nidaamka
Nadiifinta nidaamka ka files aan loo baahnayn
defragmentation drive adag
Bixisaa raad joogo ee internet-ka
Wise Disk Cleaner Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... Wise Registry Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... YGS Virtual Piano 2010.05.07